Translate household in Burmese with contextual examples
Results for household translation from English to Burmese
ပြစ်ကိလနှင့်အာကုလမှစ၍ ဩနေသိဇော်၏ အိမ်သူအိမ်သားများကို နှုတ်ဆက်လော့။
အိမ်သူအိမ်သား ပြုမူသမျှတို့ကို ကြည့်ရှုတတ် ၏။ပျင်းရိခြင်းအစာကို မစားတတ်၊
အဟိရှာသည် နန်းတော်အုပ်ဖြစ်၏။ အာဗဿားအဒေါနိရံသည် အခွန်တော်ဝန်ဖြစ်၏။
Let me share with you some of the ideals I on which I was brought up on in our household.
အစဉ်အလာအတိုင်း ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းသော ခရစ်ယာန် မိသားစုတွင် ကြီးပြင်းလာရသည့် လူသားတစ်ဦးဖြစ်သည့်အလျောက်၊
တပည့်တော်စစ်ဖြစ်သော အပေလေနှင့် အာရိတ္တောဗုလု၏ အိမ်သူအိမ်သားတို့ကို နှုတ်ဆက် ကြလော့။
မိုဃ်းပွင့်ကျသော်လည်း၊ မိမိအိမ်သူ အိမ်သားတို့ အတွက်မစိုးရိမ်၊ အိမ်သူအိမ်သားအပေါင်းတို့သည် ကတ္တီပါနီကို ဝတ်ကြ၏။
ငါ၏အဆွေအမျိုးဟေရောဒျုန်နှင့် တပည့်တော် ဖြစ်သောနာကိသု၏အိမ်သူအိမ်သားတို့ကို နှုတ်ဆက် ကြလော့။
သတေဖန်၏အိမ်သူအိမ်သားတို့အားလည်း ဗတ္တိဇံကို ပေးပြီ။ ထိုမှတပါးအခြားသောသူအား ဗတ္တိဇံ ပေးသည်ကိုငါမမှတ်မိ။
ထိုကြောင့်ငါတို့သည် အဆင်သင့်သည်အတိုင်း ယုံကြည်ခြင်း၏ အိမ်သူအိမ်သားတို့၌ အထူးသဖြင့် ကျေးဇူးပြုလျက်၊ ခပ်သိမ်းသောသူတို့အား ကျေးဇူးပြုကြကုန်အံ့။
မိုဃ်းမလင်းမှီထလျက်၊ အိမ်သူအိမ်သားတို့အား စားစရာကို၎င်း၊ ကျွန်မတို့အား အငန်အတာကို၎င်း၊ ပေးဝေတတ်၏။
ထိုအခါ ငါသည် အလွန်နာကြင်သောစိတ်ရှိ၍ တောဘိဥစ္စာ ပရိကံရှိသမျှကို အခန်းထဲက ထုတ်ပစ်ပြီးမှ၊
There was no concepts of 24/7 water supply where every household had to dig into their bit of land.
အသိ​တရား​နှင့် တာဝန်​ကျေ​မှု​တို့​ကို သုံး​၍ ကမ္ဘာ​မြေကြီး​အား လောက​ငရဲ​အဖြစ်​သို့ ပြောင်း​ပစ်​နေ​ကြ​ခြင်း​သာ ဖြစ်​သည်။
These communities present challenges such as young people required to help with household or field-related chores.
ကျေးလက် ဒေသခံများအနေဖြင့် လူငယ်များကို အိမ်မှုကိစ္စများနှင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းများတွင် အကူအညီ ပေးစေလိုကြသည့်အတွက် စိန်ခေါ်မှုများ နှင့်ကြုံတွေ့နေရသည်။
ထာဝရဘုရား ရွေးကောက်တော်မူသော အရပ် ၌ သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားရှေ့တော်မှာ ထိုသိုးနွားတို့ကို နှစ်စဉ်မပြတ် အိမ်သူအိမ်သားတို့နှင့် တကွ ကိုယ်တိုင်စားရမည်။
သင်စားစရာဘို့၊ အိမ်သူအိမ်သားစားစရာဘို့၊ ကျွန်မိန်းမများကို ကျွေးစရာဘို့ ဆိတ်နို့လောက်လိမ့်မည်။
မိမိ၌ပါသောလူများ၊ အိမ်ထောင်များတို့ကိုလည်း ဒါဝိဒ်သည် ခေါ်ခဲ့၍သူတို့သည် ဟေဗြုန်မြို့ရွာတို့၌ နေကြ၏။
bakit gusto mong mag aral (Tagalog>English)anu ibig sabihin ng pagpag (English>Tagalog)serumtransaminasen (German>Maltese)zirconio (Italian>Polish)ha paura xei ragni (Italian>English)πιστοποιητικα πλοηγησης (Greek>French)främlingsfientlighet (Swedish>Maltese)vorgeschmierte (German>English)encuadernadores (Spanish>German)давнього (Ukrainian>Polish)omnitrope (Finnish>Czech)no mames wey (Spanish>English)implevit (Latin>English)gambar memek prwn (Indonesian>Javanese)корабля (Ukrainian>Polish)explicarem (Catalan>German)tawhiti (Maori>Spanish)finally comealong away (English>Nepali)mitolohiya ng persia (Tagalog>English)acheminement (English>French)罗阿尔 (Chinese (Simplified)>Arabic)ethnocentric (English>Dutch)lihavalmisteet (Finnish>Slovak)regterboud (Afrikaans>Portuguese)muy bien, gracias guapas (Spanish>English)